About Us - Jiangsu Julong CNC Machine Chishandiswa Co., Ltd.
Jiangsu Julong CNC Machine Chishandiswa Co., Ltd.Is riri "muruoko achiveura uye shangu muchina", nantong Hai 'an libao specialized kweShanduro yokuvevura muchina, vakafugama muchina, rinopfungaira muchina, simbi yokuvevura muchina (nemizariro yokuvevura machine), hydraulic muchina, uncoiling munoenzanisa mutsetse. Chekambani yakatevedzana zvigadzirwa, chiine chimiro, mukuru nemazvo, nyore kuti ishande, yakadzikama basa, vakachengeteka uye yakavimbika, zvinowanzoshandiswa simbi rinopfungaira, motokari ndege, zvikepe, vanokwanisa, zvishandiso, Stainless simbi zvinhu nezvimwe maindasitiri.
The kambani ine simba waishandiswa simba uye yemhando kubudiswa zvokushandisa, kugadzirwa nekuongororwa michina yakakwana, zvigadzirwa vachishandisa National mitemo kugadzirwa. Kwemakore, zvakapiwa nokuchengetedza pakutsvakurudza muchina chokushandisa uye kukura, zvakasiyana-siyana oversize chigadzirwa akaberekwa pano, ari chete indasitiri pamberi. Hydraulic yokuvevura Machine, vakafugama muchina, pakatanga zvigadzirwa German, magadzirirwo gadzira pamusoro chinotenderera nokudenga muchina okusuma Japanese michina, muchina wose kuita asvika international akura vanochiva mumakore achangopfuura, kambani yakatanga dzakatevedzana CNC zvigadzirwa, edu zvigadzirwa tengesa zvakanaka zvose pamusoro nyika zvakanaka aivigirwa kuti kumabvazuva Asia, Europe uye United States neMiddle East, yagara vakafarirwa mudzimba uye vatorwa vanamuzvinabhizimisi arumbidzwe.
Tinogamuchira pachokwadi kutungamirirwa vavatorwa mudzimba kukuvadza vezvokutengeserana chiedza mashanu, zvachose chidzidzo kukura, isu zvikuru kupa imi kupfuura yepamusoro chigadzirwa uye basa. Ngationei kupa rukukwe vepachokwadi pamwe chete, kuteerera mukurumbira, nguva dzose kutora "unhu wokutanga, mutengi waangafananidzwa" kumutsa mufananidzo, utore mukuru mukoma chimiro Pachine, zvakafanana kukura. Imwe pamwe, shamwari nokusingaperi!